प्रधानमन्त्रीले पिरिस जलविद्युत संयन्त्रको निरीक्षणपछि के भने ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार प्रधानमन्त्रीले पिरिस जलविद्युत संयन्त्रको निरीक्षणपछि के भने ?
प्रधानमन्त्रीले पिरिस जलविद्युत संयन्त्रको निरीक्षणपछि के भने ?
on: १५ आश्विन २०७५, सोमबार १२:३३ In: समाचारTags: No Comments
सान होजे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोस्टारिकाको लस सान्तोस, इओलिका पार्कस्थित पिरिस जलविद्युत संयन्त्र निरीक्षण गरे ।
कोस्टारिका स्थिर प्रजातन्त्र भएको मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । यहाँ निकै शिक्षित र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने जनशक्ति छ । यस मुलुकले शिक्षामा निकै लगानी गरेको देखिन्छ । यो मुलुक पनि कृषिमा निर्भर छ । हाल यसले वित्त, विदेशी कम्पनीका लागि सेवा (स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रका आधारमा), औषधि उत्पादन तथा पर्यावरणीय पर्यटनको क्षेत्र विस्तार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा उहाँकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य रहेका थिए । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागी, शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी तथा नेपाल सरकारका अन्य वरिष्ठ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।